Careers - Meals on Wheels
Xiisaynaya xirfad ka caawineysa isku xirka waayeelka iyo dadka naafada ah cuntada nafaqada leh ee ay ugu baahan yihiin inay ku sii noolaadaan guriga? Fadlan ku eeg fursadaha soo socda Metro Meals on Wheels iyo la-hawlgalayaasha barnaamijka.
Cuntada metrooga ee giraangiraha
Delivery Associate ayaa mas'uul ka ah xirxirida iyo diyaarinta cuntada iyadoo la raacayo cuntada, taariikhda iyo goobta, u raridda cunnooyinka goob kasta oo xaafadeed maalin walba ah iyo soo celinta iyo nadiifinta qalabka baakadaha.
Cunnada Wheels Jikada Fursadaha iyadoo lala kaashanayo Open Arms of Minnesota
Fadlan eeg hubka furan bogga shaqada furitaanka la xiriira.
Metro Meals on Wheels waxay lashaqeysaa 32 barnaamijyada xubnaha xaafadda ee gaarsiinta Cunnada ee Wheels dhammaan magaalooyinka Mataanaha ah. Shaqooyinka soo socda iyo guddiga maamulka fursadaha waxaa laga heli karaa barnaamijyada xaafaddayada:
Isu -duwaha Wacyi -gelinta Islaamka - Cunnooyinka Eastside ee Baabuurta
Isu -duwaha Wacyi -gelinta Islaamku wuxuu u adeegi doonaa sidii toos toos ah oo taleefan iyo xiriir emayl loogu talagalay dadka danaynaya Cunnooyinka Gawaarida. Waxay la socon doonaan masaajidda maxalliga ah iyo xarumaha bulshada ee NE iyo SE Minneapolis iyo St. Anthony Village si loo abuuro fursado wacyigelin.
Hoggaamiyaha karinta - Al Maa'uun
The Meals on Wheels Lead Cook ayaa ka caawin doonta diyaarinta cuntada loogu talagalay Macaamiisha Gawaarida.
Xubin Gudiga - Edina Cuntada Lugaha
Edina Meals on Wheels waxay raadineysaa khasnaji ugu jira sabuuradooda. Fadlan la xiriir Laurie Lupient ee [email protected] ama 612-760-8200.
Xuquuqda daabacaadda ee 2021 Cuntooyinka Magaalada. Dhammaan Xuquuqda Ayadaa leh